Dib-u-eegista Helitaanka Maskaxda - Akhriska maskaxda ee internetka
Akhrinta maskaxda internetka > Dib-u-eegista Helitaanka Dhimirka
Dib-u-eegista Helitaanka Daryeelka Maskaxda ah
Helitaanka Cilmi-nafsiga waa mid ka mid ah shabakadaha cusub ee cilmi-nafsiga loo yaqaan laakiin waa inaan dhahaa way fiican yihiin. Iyaga ayaa iska leh, oo ay maamusho cilmi-nafsiga caanka ah ee adduunka ee DougC. Helitaanka Maskaxdu waxay bixisaa dhowr dariiqo oo lagula xiriiro la-taliyeyaasha maskaxda ee dhabta ah oo ay ka mid yihiin akhrinta websaydhka tooska ah, akhrinta emaylka, iyo sidoo kale qolalka lagu sheekeysto ee bilaashka ah. Maskax kasta oo ay shaqaaleeyaan Helitaanka Maskaxdu si adag ayaa loo baaray si loo hubiyo inay yihiin la-taliye maskaxeed oo dhab ah. Kaliya 5% codsadeyaasha Helitaanka Maskaxda ayaa la shaqaaleeyay. Waxay sidoo kale bixiyaan 100% dammaanad qancin ah haddii aadan ku faraxsanayn akhriskaaga.
Helitaanka Cilmi-nafsiga waxaa lagu aasaasay 2005, oo leh maskax ahaansho wanaagsan oo lagu magacaabo DougC. Inkasta oo shirkadani tahay 4 sano jir waxay caddeeyeen in macaamilka uu yimaado marka hore. Ilaa hadda munaasabadda Cudurka Maskaxiyan waxaa lahadalaya oo ay maamusho Psychic dhab ah. Nidaamka baadhitaanka maskaxeed ee maskaxda ayaa la socota iyada oo la adeegsanayo Cilmi-nafsiga.
Baaritaanka Daaweynta Maskaxda
Helitaanka Cilmi-nafsiga waa mid ka mid ah shabakadaha maskaxda ee aan jecelahay sababta oo ah waxay heystaan ​​nidaam baaritaan oo aad u adag. Qof kasta oo maskaxiyan ah oo quseeya Dhimirka Maqnaanshaha waxaa shakhsiyan wareysi ka ah milkiilaha oo sidoo kale la taliye cilmi nafsi ahaan loo yaqaan. Taasi waa wax kaliya oo aad hesho marka aad ganacsi la leedahay ganacsi yar oo gaar loo leeyahay. Marka laga reebo Isha Maqalka, Helitaanka Cilmi-nafsiga waxay leedahay hababka wareysiga nafsi ee ugu fiican ee meel kasta.
Websaydhka Cudurka Maskaxda
The Helitaanka Cilmi-nafsiga degelku waa mid aad u fudud in la isticmaalo, oo si fiican loo dhigay. Maaha wax la jecel yahay sida qaar ka mid ah adeegyada kale ee maskaxda, laakiin si yaab leh ayey u shaqaysaa. Waxaad ka iibsan kartaa daqiiqado toos ah websaydhka, waxaad jadwal u samayn kartaa akhris maskaxeed, waxaadna la xiriiri kartaa taageerada macaamilka dhammaantood adoo isticmaalaya soo galida websaydhka. In kasta oo aysan qurux badnayn haddana waxay ahayd tan ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee laga isticmaalo dhammaan shabakadaha maskaxda ee aan isticmaalo.
Helitaanka Cilmi-nafsiga waxay heshiis fiican la leedahay macaamiisha cusub. Markaad wax iibsato waxaad si otomaatig ah u heli doontaa 6 daqiiqo oo bilaash ah. Waxaad u isticmaali kartaa daqiiqadaha wadahadalka, taleefanka ama websaydhka akhrinta maskaxda ee maskax kasta oo ku jirta internetka. Daqiiqadaha dheeriga ah waa kuwo fiican gaar ahaan haddii aad miisaaniyad ku jirto ama haddii aad weydiiso wax badan oo aad u fudud oo aad si fudud uga jawaabi karto su'aalaha.
Mar walba waan ku faraxsanahay Helitaanka Cilmi-nafsiga'waaxda adeegga macaamiisha. Waxay bixiyaan taageero taleefan inta lagu jiro saacadaha shaqada caadiga ah, iyo dhammaadka usbuuca. Taageerada emaylka waa la heli karaa 24 × 7. Marwalba waxaan kahelay adeegooda macaamiil edeb leh, oo sooman dhowr jeer oo aan ku qasbanahay inaan isticmaalo.